Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → décembre → 30 → “Bandes des dix” tao Andranomadio Toamasina : Tovolahy vao nivoaka tapa-bolana am-ponja no sefon’izy ireo
Izany Nicolas vao nivoaka tapa-bolana nahavita ny saziny am-ponja izany no sefoben’ireto antsoina hoe: “Bandes des dix” mampiaiky ireo fianakaviana maro ao Andranomadio sy Mangarano II ary Ambalamanasy amin’ny famakiana trano. Raha tsy eo i Nicolas, dia i Dadah na RandrianFrancis Julien no mpitarika ity andian-jiolahy mpamaky trano ity, araka ny fanazavana azo hatrany.
Taorian’ilay fanafihana tao Andranomadio ka nahavoatifitra ilay zandary teo amin’ny feny sy nahaverezana entana sy vola tao aminy, dia nanao ezaka ny zandary nisambotra ity andian- jiolahy “bandes des dix” ity tamin’ny fiaraha-miasa amin’ny andrimasom-pokonolona; ka ankehitriny dia 8 ireto jiolahy ireto no voasambotra izao, niaraka tamin’ny antsy be 5, sy ny fitaovana fanapahana rojo iray sy vy, ary saron-tava roa. Mbola tsy tratra tamin’izao hetsiky ny zandary izao kosa ireo bandy roa lahy mpitondra ilay basy fampiasan’izy ireo; izay naha-voatifitra ilay zandary ary raha ny angom-baovao natao dia tsy mipetraka ao Andranomadio fa olona antsoina isaky ny halatra atao izy roa lahy ireo. Araka ny fanazavan’ny zandary, dia olona roa no tratra tamin’ny voalohany ka isan’izany i Franck . Izy roa lahy ireo no nanoro ny namany 5 nampiakatra azy ho 7 aloha ary i Nicolas kosa no nanoro ilay iray ambiny nahatonga azy ho 8 ankehitriny. Ao am-panarahan-dia ireo roa lahy mpitam-basy izao ny zandary amin’ny fikarohana ao anatin’ilay finday roa latsaka fampiasan’ireto jiolahy tamin’ny fotoana nifanenjehana taminy, tao Andranomadio sy Ambalamanasy.
Ankoatra izany, dia mampitandrina ireo andian-tanora mpanao andiany roa mpitondra môtô scooter sy BW’s mpandrava olona mpitondra na mpaka vola ny zandary, fa efa misy ny vaovao momba azy ireny efa azon’ny zandary izao. Mampitandrina ireo mpiray tendro koa izay misy ireo mpiasan’ny sampana fikirakirana vola na ireo toerana manakaiky azy ireny, ho avy ny hetsika manokana vao feno ny vaovao hoy ny zandary.
Tsinjo 30 décembre 2019 at 11 h 06 min · Edit
Malaky fiasa rehefa mpitandro filaminana no victime.
Mampanahy sao tondromolotra fotsiny no itanana ireo olona satria ny basy indray dia toa hoe tsy azo. Dia izay manana antsibe izany ka tondroin’ity gadra votsotra ity dia adoboka. Aiza ilay porofo tsy azo ivalozana?